China 100 gsm / 160gsm Fibreglass Mesh mveliso kunye nabathengisi | Yuniu
Fibreglass mesh yi-fiberglass leno ilaphu njenge-substrate, i-anti-emulsion polymer enamathela emva kokuntywiliselwa, enokumelana ne-alkali elungileyo, ubhetyebhetye kunye namandla omeleleyo wokuqina, inokusetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yokuphelisa yokugquma yangaphandle (i-EIFS), inkqubo yokuphahla, imarble, njl.
Umba Ubunzima bebonke (gsm) Ubungakanani enemingxuma (mm) Ukuluka
Mesh Fibreglass 110gsm 4 * 4 leno
Mesh Fibreglass 160gsm 6 * 6 leno
1. Uzinzo lweekhemikhali olulungileyo. Iyaxhathisa kwialkali, iasidi, amanzi, ukhukuliseko lwesamente kunye nokunye ukubola kwemichiza; inamandla okubopha amandla kunye nentlaka kwaye inyibilika ngokulula kwi-styrene.
2. Amandla aphezulu, iimodyuli eziphezulu kunye nobunzima bokukhanya.
3.Ukuzinza okungcono, kunzima, kucaba, akukho lula ukuncipha, ukukhubazeka kunye nokuma.
4. Ukuchasana nefuthe elifanelekileyo. (Ngenxa yamandla ayo aphezulu kunye nobulukhuni)
5.Anti-ukungunda kunye izinambuzane.
6. Uthintelo lomlilo, ulondolozo lobushushu, ukugquma kwesandi kunye nobushushu.
1) izinto zokuqinisa udonga (ezinje ngefayibha yeglasi fiberglass, udonga lwebhodi, i-EPS ibhodi yokugquma udonga lwangaphakathi, ibhodi ye-gypsum, njl.
2) Ukuphuculwa kweemveliso zesamente (ezinje ngeentsika zaseRoma, iiflu, njl. Njl.).
3) Granite, net mosaic, nezemarmore umva net.
4) ilaphu ndizayo manzi kunye asphalt uphahla zingangenwa ngamanzi.
5) Qinisekisa izinto zamathambo zeplastiki kunye neemveliso zerabha.
6) ibhodi engangenwa.
7) Ilaphu elisezantsi lokuguba kwevili.
Fibreglass mesh ihlala isongelwe kwiingxowa ze-polyethylene, emva koko ii-rolls ezi-4 zipakishwe kwibhokisi efanelekileyo. Isikhongozeli esisezantsi seenyawo ezingama-20 sinokugcwaliswa malunga ne-70,000 m2 ye-fiberglass mesh, kwaye isingxobo seenyawo ezingama-40 sinokugcwaliswa malunga ne-150,000 m2 ye-fiberglass mesh.
Zothutho: ulwandle okanye umoya
Egqithileyo Ubushushu enganyangekiyo iglasi ifayibha ephothiweyo ihamba nomgangatho ophezulu
Okulandelayo: Imveliso yobuninzi beglasi yefayibha ecekecekileyo
Ubushushu-enganyangekiyo iglasi ifayibha womluki behamba hi ...